जुम्ली स्याउले मूल्य नपाउँदा कृषकलाई पर्नु पर्यो पीर,कमजोर मूल्य श्रृंखलाको परिणाम,राज्यको ध्यान कहिलेसम्ममा पुग्ने ? « Everestweek – Nepal's Popular Digital NewsPaper
जुम्ली स्याउले मूल्य नपाउँदा कृषकलाई पर्नु पर्यो पीर,कमजोर मूल्य श्रृंखलाको परिणाम,राज्यको ध्यान कहिलेसम्ममा पुग्ने ?
६ आश्विन २०७६, सोमबार ०८:२१
गत वर्ष जुम्ली कृषकले आफ्नै बगैँचामा रहेको स्याउको प्रतिकेजी रु ७० मा बिक्री गरे । उत्पादन थोरै भए पनि आम्दानी मनग्ये नै भयो तर यस वर्ष भने प्रतिकेजी रु ३५–५० मूल्य पाउन पनि मुस्किल भएको छ ।
यता जुम्लामा स्याउ गोदामका गोदाम थन्किएर बसेको छ भने यता काठमाण्डौंमा भने स्याउ मात्र होइन कुनै पनि फलफूलको भाउ आकासिएर गएको छ । स्याउ प्रतिकेजी २०० देखि ४०० सम्ममा पनि हारालुछ छ । कमजोर मूल्य श्रृंखलाका कारण नेपालमै उत्पादित स्याउ तथा अन्य वस्तुहरु अनावश्यक रुपमा खेर गइरहेको छ भने कृषकहरु भनेजस्तो मूल्य नपाएर निराश भएका छन् ।
स्याउले नेपाली बजार ढाकेर भारतीय स्याउ विस्थापित गरे पनि लगानीअनुसारको मूल्य प्राप्त नगरेको स्याउ किसानले गुनासो गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका– ८ जुम्ला उम्खोला गाउँका कृषक धर्मसिंह कठायतले राम्रो मूल्य पाउने आशाले सुर्खेतमा स्याउ पु¥याउँदा पनि घैयाको भाउमा स्याउ बेच्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
“पोहोर साल घरमा १५ क्विन्टल स्याउ उत्पादन गरे घरमै प्रतिकेजी रु ५०–७० हामी किसानले मूल्य पायौँ । यसले हामीलाई खेती गर्नतर्फ उत्साहित पनि बनायो”, कृषक कठायतले भने, “रातदिनको मेहनतले होला यस वर्ष १०८ क्विन्टल स्याउ उत्पादन भयो । प्रतिकेजी रु १०० पर्ने स्याउ सुर्खेतमा पु¥याउँदासमेत मुस्किलले प्रतिकेजी रु ५९ मा बाध्य भएर बिक्री गर्नुप¥यो ।”